မိသားစုနဲ့ဝေးရာရောက်နေချိန်မှာ Omicron ကူးစက်ခံထား ရတယ် ဆိုတဲ့ ပရိတ်သတ် အချစ်တော် အဆိုတော် Sophia – Shwe Likes
မိသားစုနဲ့ဝေးရာရောက်နေချိန်မှာ Omicron ကူးစက်ခံထား ရတယ် ဆိုတဲ့ ပရိတ်သတ် အချစ်တော် အဆိုတော် Sophia
နာမည်ကျော် Myanmar Idol အ ဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ညှို့အားပြင်းပြီး ကြည်လ င်ပြတ်သား တဲ့ အသံ နဲ့ မိမိုက် လှပတဲ့သီဆို ဟန်တွေ ကြောင့် ပရိတ်သတ် ရင်ထဲ နေရာ ယူလာပြီး ပရိတ်သတ်များ ရဲ့ချစ်ခင် အားပေးမှုကို ရရှိလာ သူတစ်ဦး ကတော့ အဆိုတော် Sophia Everest Aurora ပဲဖြစ်ပါ တယ်။
သူမဟာ လက်ရှိမှာ မိသားစုနှင့် ခွဲခွာကာ ဒူဘိုင်းနို င်ငံကို တစ်ယောက်တည်း ရောက်ရှိနေတာြ ဖစ်ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်က သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ မှာ အကြောင်းအ ရာတစ်ခုကို သူမဟာ ရင်ဖွင့်လာ ခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ ဒူဘို င်းသို့ရောက်မှ Omicron ရောဂါပိုးကူး စက်ခံ ထားရတယ်လို့ ဆိုလာ တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရေးသားထားပုံကတော့ ” ရန်ကုန် မှာ တအိမ်လုံး Covid ဖြစ်တာတော င် မဖြစ်ခဲ့ဘူး….Fully vaccinated လုပ်ပီးမှ UAE Dubai ကိုလာခဲ့တယ်….Third wave လည်း မကူး ဘူး….
Omicron ကျမှ ကူးတာ Oxygen 70 ထိ ကျခဲ့တယ်…သေမလို ဖြ စ်တော့ ကိုယ်တယောက် တည်းပါပဲ…နိုင်ငံရပ်ခြားလေ ဘသူလာေ ပးနိုင်မှာလည်း….ခု ၁၁ ရက်မြောက်နေ့။ လမ်းလျော က်လည်းမော…..ဒီတိုင်း သီချင်းလေးဆိုတာတောင် မောတယ် ရင်တုန်ပန်း တုန်နဲ့ ….တကယ် ဖြစ်တော့လည်း တယော က်တည်းပါပဲ….
အဲ့တော့ ဘာကိုမှ သိပ်မစွဲလ မ်းတာ ကောင်းတယ်….တယောက် တည်းနေကျင့်ရှိ ရင် ဘာလာလာ ရင်ဆိုင်နို င်တယ်လေ “ဟူ၍ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ပရိတ်သ တ်တွေက သူမအတွက်စိုးရိ မ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အ ဆိုတော် Sophia တစ်ယောက် Omicron ရောဂါပိုးကိုအမြန် ဆုံးတိုက် ထုတ်နိုင်ပြီး ပြန်လည်ကျန်းမာလာ ပါစေလို့ဆုတောင်းပေး လိုက် ရပါတယ်။
နာမည္ေက်ာ္ Myanmar Idol အ ဆိုၿပိဳင္ပြဲမွာ ညႇို႔အားျပင္းၿပီး ၾကည္လ င္ျပတ္သား တဲ့ အသံ နဲ႔ မိမိုက္ လွပတဲ့သီဆို ဟန္ေတြ ေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ ရင္ထဲ ေနရာ ယူလာၿပီး ပရိတ္သတ္မ်ား ရဲ့ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈကို ရရွိလာ သူတစ္ဦး ကေတာ့ အဆိုေတာ္ Sophia Everest Aurora ပဲျဖစ္ပါ တယ္။
သူမဟာ လက္ရွိမွာ မိသားစုႏွင့္ ခြဲခြာကာ ဒူဘိုင္းနို င္ငံကို တစ္ေယာက္တည္း ေရာက္ရွိေနတာျ ဖစ္ပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္က သူမရဲ့ Facebook စာမ်က္ႏွာ မွာ အေၾကာင္းအ ရာတစ္ခုကို သူမဟာ ရင္ဖြင့္လာ ခဲ့ပါတယ္။
သူမဟာ ဒူဘို င္းသို႔ေရာက္မွ Omicron ေရာဂါပိုးကူး စက္ခံ ထားရတယ္လို႔ ဆိုလာ တာျဖစ္ပါတယ္။ သူမေရးသားထားပုံကေတာ့ ” ရန္ကုန္ မွာ တအိမ္လုံး Covid ျဖစ္တာေတာ င္ မျဖစ္ခဲ့ဘူး….Fully vaccinated လုပ္ပီးမွ UAE Dubai ကိုလာခဲ့တယ္….Third wave လည္း မကူး ဘူး….
Omicron က်မွ ကူးတာ Oxygen 70 ထိ က်ခဲ့တယ္…ေသမလို ၿဖ စ္ေတာ့ ကိုယ္တေယာက္ တည္းပါပဲ…နိုင္ငံရပ္ျခားေလ ဘသူလာေ ပးနိုင္မွာလည္း….ခု ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔။ လမ္းေလ်ာ က္လည္းေမာ…..ဒီတိုင္း သီခ်င္းေလးဆိုတာေတာင္ ေမာတယ္ ရင္တုန္ပန္း တုန္နဲ႔ ….တကယ္ ျဖစ္ေတာ့လည္း တေယာ က္တည္းပါပဲ….
အဲ့ေတာ့ ဘာကိုမွ သိပ္မစြဲလ မ္းတာ ေကာင္းတယ္….တေယာက္ တည္းေနက်င့္ရွိ ရင္ ဘာလာလာ ရင္ဆိုင္နို င္တယ္ေလ “ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး သူမရဲ့ ပရိတ္သ တ္ေတြက သူမအတြက္စိုးရိ မ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အ ဆိုေတာ္ Sophia တစ္ေယာက္ Omicron ေရာဂါပိုးကိုအျမန္ ဆုံးတိုက္ ထုတ္နိုင္ၿပီး ျပန္လည္က်န္းမာလာ ပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပး လိုက္ ရပါတယ္။
BlueShirt Day မှာ ပါဝင်ရဖို့ မိန်းမလေးအင်္ကျီကို ပြောင်းပြန်လှန်ဝတ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ ရေမွန် အကြောင်းပြောလာတဲ့ လပြည့်ကဗျာ
ကြည့်မြင်တိုင် ကြွေလွင့် ကြယ်ပွင့်လေးများအားရည်စူးပီး ကိုယ်တိုင် ဆွမ်းချက်လှူ ကုသိုလ်ယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နေရွှေသွေးအောင်ရဲ့ ဖခင်ကြီး